ပေကျင်းဆောင်းရာသီအိုလံပစ်သို့ တက်ရောက်ရန် အမေရိကန်နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူများ ဗီဇာလျှောက်ထားကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ အတည်ပြု - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ မြို့တော် ပေကျင်း Shougang ဥယျာဉ် ရှိ အိုလံပစ်မီးတောက်ပြခန်းတွင် ပြသထားသော ၂၀၂၂ ပေကျင်း ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်အတွက် အိုလံပစ်မီးတောက်အား ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်းဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတက်ရောက်ရန်အတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံ တာဝန်ရှိသူများ၏ ဗီဇာလျှောက်ထားမှုကို တရုတ်ဘက်က လက်ခံရရှိကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက်တွင် အတည်ပြုခဲ့သည်။
ပေကျင်းဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပွဲအတွင်း အမေရိကန်အားကစားသမားများအတွက် လုံခြုံရေး နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီပေးရန် အထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့မှ တာဝန်ရှိသူ ၁၈ ဦးအား တရုတ်နိုင်ငံသို့ စေလွှတ်နိုင်ရေးအတွက် အမေရိကန်အစိုးရက မကြာသေးမီက တောင်းဆိုခဲ့သည့် သတင်းများအပေါ် မှတ်ချက်ပေးရန် သတင်းထောက်တစ်ဦးက မေးမြန်းခဲ့ရာတွင် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Zhao Lijian က အထက်ပါအတိုင်း အတည်ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး အခြားတာဝန်ရှိသူ ၄၀ ဦးအတွက် ဗီဇာလျှောက်ထားမှုကိုလည်း နောက်ပိုင်းတွင် တင်ပြလာနိုင်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
တရုတ်နိုင်ငံဘက်က တရားဝင်ဖိတ်ကြားထားခြင်းမရှိလင့်ကစား အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ပေကျင်းဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲသို့ ၎င်း၏ သံတမန် သို့မဟုတ် အစိုးရကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့စေလွှတ်သွားမည်မဟုတ်ကြောင်း နိုင်ငံရေးအရ လိုရာဆွဲကာ အစောပိုင်းတွင် ပြောကြားခဲ့သည်ဟု Zhao က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသို့ အစိုးရအရာရှိအဖွဲ့တစ်ခုစေလွှတ်နိုင်ရေးအတွက် အမေရိကန်၏ တောင်းဆိုချက်အပေါ် တရုတ်နိုင်ငံက ကိုင်တွယ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ ဗီဇာလျှောက်ထားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတကာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ၊ ဆက်စပ်စည်းမျဉ်းဥပဒေများ နှင့် နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန် စည်မျဉ်း စည်းကမ်းများအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဆိုသည်။
“ပေကျင်းဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲ အားနည်း သေးတိမ်သွားစေမယ့် ဒါမှမဟုတ် အနှောက်အယှက် အဟန့်အတားဖြစ်စေမယ့် အပြုအမူတွေ နဲ့ မဟုတ်တန်းရာပြောဆိုနေမှုတွေကို ရပ်တံ့ဖို့ ၊ အိုလံပစ်စိတ်ဓာတ်လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့ နဲ့ အားကစားကို နိုင်ငံရေးအသုံးချခြင်းမှ လျှောင်ကြဉ်ဖို့ အတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံကို နောက်ထပ်တစ်ဖန် တိုက်တွန်းပါတယ် ” ဟု Zhao က ဆိုသည်။(Xinhua)
BEIJING, Dec. 27 (Xinhua) — A Chinese foreign ministry spokesperson on Monday confirmed that the Chinese side has received visa applications from relevant U.S. personnel with regard to the Beijing Winter Olympic Games.
“Once again we urge the U.S. to follow the Olympic spirit in practice, refrain from politicizing sports, and stop erroneous words and acts that disrupt or undermine the Beijing Winter Olympics,” Zhao said. ■